शाकाहारी हुँदा के फरक पर्छ ? | Hindu Khabar
July 9, 2020 8:23 pm || ॐ भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ||
१० चैत्र २०७६, सोमबार २१:३५ मा प्रकाशित In: Breaking news, धर्म/संस्कृति, धार्मिक ग्यालरी, मुख्य खबर, समाज, स्वास्थ्य
हिन्दुखबर ; शाकाहारी र मांसाहारीहरुको झ्यासम्यासे यो काठमाडौंमा मांसाहारीहरुको तुलनामा अवश्य पनि शाकाहारीहरुले धेरै पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ । शाकाहारीहरुको पनि विभिन्न प्रकार हुने गर्छ । कोही अण्डा खाने शाकाहारी हुन्छन् । कोही माछासम्म पनि खाने खालका शाकाहारी हुन्छन् । कोही माछा मासु र अण्डा समेत नखाने शाकाहारी हुन्छन् भने कोही दूध समेत नखाने शाकाहारी समेत पाइन्छ । को कस्तो किसिमका शाकाहारी हुन्छन् ? भन्ने कुरा फेरि अर्काे पाटो हुनसक्छ । तर, यी मध्ये पछिल्लो दुई किसिमको शाकाहारीहरुको लागि यो शहरको व्यवहार धेरै पीडादायी हुने गर्छ । ती समस्याहरुलाई सूचीबद्ध यसरी गर्न सकिन्छ ।
शाकाहारीहरुको लागि केही निश्चित प्रश्नहरु हुन्छन् । कहिलेदेखि मासु खान छाडेको ? कस्तोखालको शाकाहारी हो ? धार्मिक भावनाले शाकाहार बनेको कि किन बनेको ? जस्ता यावत प्रश्नहरुको बनावटी भएपनि उत्तर दिनु शाकाहारीहरुको लागि हरेक नयाँ मान्छे भेट्दाको कर्तव्य नै बन्न आउँछ । यो केवल प्रश्न मात्रै होइन मनोवैज्ञानिक दबाब पनि हो ।
शाकाहारीहरुको पनि आ-आफ्नै किसिको कारण हुने गर्छ । धेरै मानिसहरु आफ्नो स्वास्थ्यको कारण शाकाहारी बन्ने गर्छन् । कोही कोही पशुहरुको मायाको कारणले पनि शाकाहारी बन्ने गर्छन् भने कोही धार्मिक भावनाका कारण पनि शाकाहारी बन्ने गर्छन् । धार्मिक भावना भित्र पनि एकाध सम्प्रदायका मानिसहरु मात्रै शाकाहारी बन्ने गरेका हुन्छन् । स्वास्थ्यको कारणले मासु छाडेकाहरुको लागिभन्दा पशुहरुको मायाको कारणले मासु खान छाडेको र धार्मिक कारणले मासु खान छाडेकाहरुको लागि भने फेरि अर्काे थप प्रश्नहरुको वर्षा हुने गर्छ ।